MUSIIBO: Xiddig Khabiir Ku Ahaa Dhibaataynta Bayern Munich Oo Dhaawac Kaga Maqan Liverpool – Latest Sports News
MUSIIBO: Xiddig Khabiir Ku Ahaa Dhibaataynta Bayern Munich Oo Dhaawac Kaga Maqan Liverpool
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa hadda ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda kooxdiisa Reds ee dalka Germany u safraya waxaana liiskan lagu daabacay shabakada rasmiga ah ee Liverpool iyada oo laga dhex waayay mid ka mid ah ciyaartoydii ay jamaahiirta Reds doonayeen in uu ku soo bilawdo shaxda Klopp ee kulanka Bayern Munich.
Liverpool ayaa xaqiijisay in Naby Keita aanu la safrayn ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool ee kulanka Bayern Munich kadib markii uu dhaawac fududi soo gaadhay kaas oo aanu ka ciyaaari karin kulanka Bayern Munich wuxuuna warkani niyadjab ku yahay qayb badan oo jamaahiirta Reds ka tirsan oo doonayay in Naby Keita uu ku soo bilawdo kulanka Bayern Munich.
Jurgen Klopp ayaan heli doonin adeega Naby Keita kaas oo colaad kaga kabsaday jamaahiirta kooxdiisa Liverpool markii uu dhawr kulan kaydka ku hayay gaar ahaan kulankii Everton laakiin hadda Naby Keita ayaa Liverpool baaqi ku sii ahaan doona.
Liverpool ayaa dib u heshay Virgil Van Dijk kaas oo kulankii lugtii hore ee Anfield ganaax ku maqnaa laakiin Reds ayaa mari doonta tijaabo adag iyada oo ay booqanayaan Bayern Munich oo qaab ciyaareed aad u fiican ku jirta.
Dejan Lovern oo dhaawac ka soo laabtay ayaa qayb ka ah liiska uu Jurgen Klopp magacaabay iyada oo shirkiisa jaraa’id ee uu Allianz Arena ku qaban doono uu kaga hadli doono xalaada kooxdiisa gaar ahaan Naby Keita iyo Lovern.
Liiska Ciyaartoyda Liverpool ee Germany u safraya: